Vehivavy Any Meksika: Miatrika Ny Famonoana Vehivavy Nanjo Ny Rahavaviny Amin’ny Alàlan’ny Fiadiana Hanohitra Ny Fanjakan-Dehilahy · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Rachael Lynch
Voadika ny 04 Avrily 2017 15:55 GMT
Vakio amin'ny teny Português, English, Ελληνικά, русский, Español
Viviana Muciño. Sary nahazoana alàlana.
Navoakan'i Yenn tao amin'ny Voces de Mujeres (Feon'ireo Vehivavy ) ity lahatsoratra ity tamin'ny voalohany ary naverin'ny Global Voices navoaka indray rehefa nahazo alàlana tamin'ny mpanoratra.
Novonoin'ny vadiny, Bernardo, sy ny zaodahiny, el Matute (ilay jiolahim-barotra) i Nadia Muciño tamin'ny 12 Febroary 2004. Teo amin'ny faha-efatra amby roapolo taonany no nandaozany ireo zanany lahy, Carlos sy José, ny zanany vavy, Fernanda, ny ray aman-dreniny, ireo namany, ary ireo iray tampo aminy. Na izany aza tsy tantarany ity fa ny an'ny zandriny faravavy, Viviana, izay niaina ny fampijaliana sy famonoana ny rahavaviny — karazana herisetra izay hampihorohoroana ny vehivavy manerana ny Fanjakan'i Meksikô amin'izao fotoana izao.
Tamin'ny volana Febroary lasa teo, noho ny antony ara-bola, nijanona tsy nanohy ny fianarany intsony tamin'ny ambaratonga voalohany i Viviana ary nanadino ny nofinofiny ho mpifehy. Vao avy feno roa taona i Jaciel, zanany lahy kely, ka tsy maintsy niasa izy hamelomana azy.
Tamin'ny andro namonoana an'i Nadia, nisy narary mafy an'i Viviana tao amin'ny kibony ary nanenika ny vatany manontolo izany. Ny marainan'iny, nandeha niantsena izy. Teny an-dàlana, nahita ny zaodahiny tany anaty fiarabe fitaterana ho any amin'ny fiantsonan'ny metro Toreo ( fiaran-dalamby ambanin'ny tany) izy. Fotoana fohy taorian'izay, nankany afovoan-tanàna izy hanatitra asa.
Teny an-dàlana hody, hitany fa olon-kafa no nitondra ilay fiara fitateran'i Bernardo zaodahiny. Hafahafa taminy izany. Rehefa tonga tao an-trano izy tokotokony tamin'ny 8 ora alina, dia tsy nisy afa-tsy ireo anadahiny sy ny rahavaviny no tao — tsy tao an-trano ny reniny, Antonia. Antsasakadiny aty aoriana vao niverina tao an-trano Antonia sady nikorontana tanteraka, nanazava ny zava-nanjò an'i Nadia. Te-handeha hijery ny rahavaviny i Viviana fa nosakanan'ny reniny.
Tsy navelany ho any an-tranony aho. Tsy nahita azy intsony aho mandra-panaovako veloma azy tamin'ny fiaretantory nataon-dry zareo ho fiandrasana azy.
Talohan'ny nanidiana ny vatapaty dia napetrak'i Viviana tao anatiny ny sariny sy ny an'i Jaciel ary ny sasany amin'ireo haba miloko izay tena tian-dry zareo.
Niaraka tamin'i Antonia, dia i Nadia no nanaraka akaiky an'i Viviana nandritra ny fitondrany vohoka sy ny fanarahana maso ireo volana voalohan'ny zazakely. Andry iankinany sy ho an'ny fianakaviana manontolo mandrakariva i Nadia.
Rahavaviko i Nadia, mpiaraka nanao hadalàna izahay, iray ihany izahay. Izy no naha-toy izao ahy. Ny zava-drehetra amiko dia i Nadia.
Andro vitsy taty aoriana, nanapaka hevitra i Antonia sy Viviana fa hanangana ireo zanak'i Nadia anankitelo. Nanomboka teo, dia nitombo ny asa aman'andraikitr'i Viviana — tsy i Jaciel irery intsony no laharam-pahamehana fa ireo zandrilahiny, ny zandrivaviny, ireo zanaky ny iray tampo aminy na lahy na vavy ihany koa.
Eo anelanelan'ny tara-pahazavana sy ny loharanom-pahazavana
Tahaka ireo tokatrano Meksikana maro, maneno amin'ny enina maraina ny famohamandrin'i Viviana. Mamàna ny ambin-tsakafo halina izy, miaraka amin'ny volo misahondrahondra mifatotra ao an-katoka izay manafina ilay olioly mahafinaritra, i Jaciel kosa mikarakara ny ronono misy sôkôlà-ny. Miainga mankany an-tsekoly ry zareo rehefa tonga ny amin'ny fito ora latsaka fahefany.
Rehefa tafaverina ao an-trano izy dia mikarakara tokantrano, avy eo manomboka ny zaitra izay nampianarin'i Antonia azy roapolo taona lasa. Ao amin'ny eran'asa 3x 1.80 metatra no isehoan'ny zava-mahagaga. Manamboatra atinakanjom-behivavy ho anà akanjo an-jatony ny tànany, manao sary, mampiady loko sy firindra manome endrika ireo voahangy, ireo mangirangirana, ary ireo kristaly. Mampihazakazaka azy manerana ny tanàna ny fanaterana tsirairay ny atinakanjo na ny asa vita, miaraka amin'ny baoty kely mavo, kitapo am-babena ary kitapo lamba asadika amin'ny tenda. Zara raha ampy hivelomana ny vola azo.
Amboradaran'i Vivi ( karazana petakofehy). Sary nahazoana alàlana.
Tsy nisalasala namaritra azy taminà hira tokana: Let it Be i Vivi, araka ny iantsoan'ireo namany azy. Amin'ny fotoana mampahalalaka azy, dia tia mandoko sary vita amin'ny tanimanga toy ny anjely na vehivavy tsara fanahy aminà angano izy.
Mahàlana i Viviana Muciño vao mitsiky, saingy misongadina ny hafaliany rehefa mizara ny traikefany amin'ny maha-reny sy mpikatroka mafana fo azy izy. Mpikambana mpanorina ny Fikambanana Sivily Miady amin'ny fanamparan-kery, fampijaliana, fanamparam-pahefana, ary famotehana ara-pisainana atao amin'ny vehivavy, izy teo amin'ny faha 32 taonany. Tamin'ny 2014, niaraka tamin'ireo vondrona maro hafa izy, nanampy nandrindra andiana hetsika taorian'ny nanambaràn'ny fanjakan'i Meksikô ny Fampitandremana momba ny herisetra amin'ny firaisana ara-nofo, nitsidika ireo kaominina 11 tena voa mafy ao amin'ny fanjakana ihany koa izy.
Nikarakara hetsika an-dàlambe hanehoany ny fitakiany amin'ny fitondrana i Viviana taoanatin'ilay antsoiny hoe ” fialàna aina”, niaraka tamin'ny fahatsapany fa tsy miady irery amin'ny rafitra fanjakàn-dehilahy ao amin'ny firenena izy. Efa an-taonany maro no niezahany namantatra ny havan'ireo vehivavy niharan'ny fampijaliana sy famonoana ary tsy hita popoka. Manoro hevitra azy ireo izy, manohana azy ireo, manara-maso azy ireo, sady mino fa ny firaisankina no làlana irosoana. ” Tokony ho nahavonjy an'i Nadia izany” hoy i Viviana, ary tena azony antoka zato isan-jato fa ahafahana mamonjy aina ny fiarahana miasa.
Tsy vaovao amin'ny tsy fahamarinan'ny rafi-pitsaràna ao amin'ny Fanjakan'i Meksikô i Viviana sy ny fianakaviany. Ny raharaha momba an'i Nadia, izay sady efa ahilika no mbola namoromporonana porofo, hoy izy, dia hàzan'ny mpiasam-panjakana tia kolikoly. Lazainy fa izany traikefa izany no nanazatra azy tamin'ny rafi-pitsaràna sy ny tsy mety ataony, ka nitarika azy ho amin'ireo vondron'ny miralenta sy ireo fikambanana izay manampy ireo vehivavy sisa velona avy niharan'ny herisetra. Nandresy lahatra azy izy tenany ho lasa mpikatroka mafana fo amin'ny miralenta, sy hiasa amin'ny maha-mpiaro ny zon'ny vehivavy azy ao amin'ny fanjakana ihany koa io tranga io.
Nandritra ny iraika ambin'ny folo taona farany teo, dia nanjary nazava taminay fa tsy hijanona izahay mandra-pahazoan'ny raharaha Nadia rariny eo anatrehan'ny fitsaràna. Tsy ho azy irery ihany no anaovanay izao. Tsy tianay hitranga amina vehivavy hafa intsony ny tahaka izao.
Miandry ny rariny momba ny famonoana ny rahavaviny i Viviana, hoy izy, na dia tsy misy hetsika ataon'ny governemanta aza hatramin'izao.
Mamporisika anay hanohy sy hitozo hatrany ny fahatsiarovana an'i Nadia. Fantatro fa any amin'izay misy azy any, dia mandrisika anay hanohy io làlana io izy, ary izahay kosa mbola hanampy vehivavy hatrany noho ny aminy.
Lazain'i Viviana fa ny fifamatorana iarahany amin'ireo vehivavy hafa sy ny tohana ara-tsaina azony avy amin'i Jaciel, izay anarana midika hoe anjelin'ny hatsaram-panahy sy ny fihavanana, no manosika azy.
Io kerobima kely io no nahatonga ahy hisaintsaina, fa ny tena goavana indrindra, dia ny tombony manokana amin'ny traikefa amin'ny maha-reniny ahy. Nataony mora ny zava-drehetra, tsy misy zava-tsarotra, ny fandehandehanana mivoaka miaraka amin'ny zanako, ny fahitàna azy sambatra. Mahasambatra ahy kokoa ny miaraka aminy. Fitiavana tena lehibe ananako ny fitiavana omen'ny zanako lahy ahy, tahaka izany ihany koa ny avy amin'ny fianakaviako.
Eo anelanelan'ny tara-pahazavàna sy ny loharanom-pahazavana, dia tsy hijanona mihitsy i Viviana raha tsy mahazo rariny eo anatrehan'ny fitsaràna ny raharaha momba an'i Nadia. Eny am-pandehandehanana eny, dia mihevitra izy fa indray andro any dia ho metimety kokoa ny fiainan'ny vehivavy, miaina ao anatin'ny firenena azo antoka.
Tao amin'ny Voces de Mujeres ( feon'ireo vehivavy) no namoahan'i Yenn ity lahatsoratra ity voalohany ary naverin'ny Global Voices navoaka indray rehefa nahazo alàlana tamin'ny mpanoratra.
7 andro izayVenezoela